China Kwete MOQ Tsika Yakarukwa Polyester Spandex Dhijitari Dhinda Liverpool Bullet Mucheka Kudhinda KweBo Textile Mugadziri uye Mutengesi | Wenchang
Kwete MOQ Tsika Yakarukwa Polyester Spandex Dhijitari Dhinda Liverpool Bullet Mucheka Kudhinda Kwe Bow Bow Textile
Chinhu Kwete: KWB-2125
Zvinyorwa: 95% Polyester 5% Spandex
CHIKAMU CHEMAHARA Bara BHUKU
Chinhu icho kwete KWB-2125
Mashoko 95% Polyester 5% Spandex
Feature Kurumidza kuoma / Kutambanudza / Kufema / Wicking
Shandisa Vana Miseve / Kupfeka / Bhegi
Monochrome jacquard jacquard dhayi jira-iyo jacquard grey jira rakarukwa nejacquard loom uye ndokuzoiswa dhayi uye kupera. Iyo jira rakapedzwa ruvara rwakasimba; yakawanda-mavara jacquard ishinda-yakashongedzwa jacquard jira-yakavezwa uye yakazorukwa nejacquard loom Iyo jira-yakashongedzwa jacquard jira rine anopfuura maviri mavara, jira rakapfuma muvara, hariratidzike senge risinganetsi, iyo pateni ine yakasimba matatu -dimensional mhedzisiro, uye giredhi rakakwira. Hupamhi hwejira hauganhurwe, uye mucheka wakachena wedonje unodzikira zvishoma, hauna bhora, uye haupere. Micheka yeJacquard inowanzo shandiswa yemhando yepamusoro- uye yepakati-mbatya zvigadzirwa zvekugadzira kana zvigadzirwa zvinoshandiswa muindasitiri yekushongedza (semaketeni, zvishandiso zvemasofa). Iyo yekugadzira nzira yejacquard machira yakaoma. Iyo yakakoswa uye shinda yewft inosangana pamwe nekukwira nekudzika, ichigadzira mapatani akasiyana, ane concavities uye convexities, uye mamwe mapatani akanaka senge maruva, shiri, hove, zvipembenene, shiri uye mhuka dzakarukwa.
Iyo yakapfava yakapfava, isina kusimba uye inotsvedza ine yakasarudzika mameseji, yakanaka gloss, yakanaka drape uye mweya kukwana, uye yakakwirira ruvara kukasira (shinda kudhaya). Iyo pateni yejacquard jira rakakura uye rakanakisa, uye iwo mavara akasiyana uye matatu-mativi, nepo pateni yediki jacquard jira iri yakapusa uye isina kuroorwa.
Mucheka weJacquard (6 machira)
Satin jacquard jira (jira): yakarukwa uye weft zvakarukwa kanenge kamwe chete pamatare matatu, saka satin kuruka kunoita jira kuwanda kwepamusoro, saka jira rakakora. Satin kuruka zvigadzirwa zvinodhura kupfuura zvakafanana plain kuruka uye twill kuruka zvigadzirwa. Micheka yakarukwa nesatin weave inosanganiswa inonzi micheka yesatin. Mucheka weSatin une kumberi nekumashure mativi. Iwo ekupindirana mapoinzi mune yakazara chiuno ndiwo mashoma, uye iyo ichiyangarara ndiyo yakarebesa. Iko pamusoro pejira kunenge kwakanyatso kuvezwa nekuyangarara mune yakarukwa kana weft nzira. Iko kuumbwa kwejira re satin nyoro. Satin jira rine kumberi nekumashure mativi, uye jira pamusoro rinotsvedza, rakanaka uye rinopenya. Mucheka we satin unowanzozivikanwa ndewe satini ine mitsetse, inonzi satin strip. Iyo yakakamurwa kuita maviri marudzi emicheka: makumi mana satin mabhurei e2 metres 4 upamhi uye 60 satin mitsetse ye2 metres 8 upamhi. Kutanga kuruka uye kudhaya maitiro, rudzi urwu rwejira rinowanzo kuve rakasimba ruvara, riine yakatwasuka mutsara wedzera. Mucheka wakachena wedonje unodzikira zvishoma, hauna bhora, uye hazvisi nyore kupera.
Satin jacquard machira (machira)
Kuziva kwe "Satin Jacquard Fabric".
Chekutanga pane zvese, ndokumbira unzwisise aya matatu mazano: plain kuruka, twill kuruka, uye satin.
Plain kuruka: Mucheka wakarukwa nekavha kuruka inonzi plain kuruka. Ndokunge, iyo yakakoswa yewell uye yefa yakasunganidzwa imwe neimwe shinda (ndokuti, shinda iri 1 kumusoro uye 1 pasi). Rudzi urwu rwejira rinoratidzwa nemazhinji ekuruka mapoinzi, kusimba mameseji, kukwenya, uye kutsetseka pamusoro. Micheka yekumusoro-yekupedzisira yekushongedza inowanzo kuve micheka yakajeka.
Twill: Iyo yakarukwa uye weft inopindirana kanokwana kamwe chete pamaburi maviri, ndiko kuti, 2 kumusoro uye 1 pasi kana 3 kumusoro uye 1 pasi. Kuwedzera warp uye weft kupindirana mapoinzi ekushandura chimiro chejira, pamwe zvinonzi twill jira. Hunhu hwemhando iyi yejira ndewekuti hwakakora uye iine simba rakasimba rehutatu-hwetatu. Pane matavi makumi matatu, matavi makumi mana, uye makumi matanhatu matavi.
Satin jira: Iyo yakarukwa uye weft zvakarukwa kamwechete angangoita matatu akapatsanurwa, saka satin kuruka kunoita kuti jira riwedzere, saka jira rakakora. Satin kuruka zvigadzirwa zvinodhura kupfuura zvakafanana bani kuruka uye twill kuruka zvigadzirwa, uye jira pamusoro riri kumeso, wakanaka uye anopenya. Plain kuruka, twill kuruka, uye satin kuruka ndiyo mitatu yakakosha yekuruka uye weft nzira yekuruka. Iko hakuna mutsauko wakasarudzika pakati pezvakanaka nezvakaipa. Imwe neimwe ine hunhu hwayo. Pakati pavo, satin inofanirwa kuve yakanakisa yemachira ekotoni akachena.
Pashure: Kurumidza Kuomesa Jacquard Mesh 84% Nylon 16% Spandex Knitting Mucheka we Shirt / Sportwear / Coat
Tsika Yekudhinda Mucheka
Liverpool Bullet Mucheka
Kudhinda KweBow Textile